नेपाल आज | अनलाइन सपिङ : ठगीको सञ्जाल
मङ्गलबार, ३० असार २०७७
कभर स्टोरी अपराध सुरक्षा समाज
अनलाइन सपिङ : ठगीको सञ्जाल
सोमबार, २१ पुष २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौँ । अनलाइनमार्फत कारोबार गर्नेले सम्झने नाम हो दराज । दराज अनलाइनले विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामान, मोबाइल, कपडा, गरगहना लगायतका सामानहरु अनलाइनलाई मार्फत बेच्दै आएको छ । आजको व्यस्त समयमा अनलाइन सपिङ सबैका लागि सहज माध्यम पनि बनेको छ ।
अक्सर मानिसहरु आफ्नो काममा व्यस्त हुने भएकाले फुर्सद हुन्न । यस्तोमा अनलाइनमा अर्डर गरेपछि घरमैँ सामान आउने भएपछि मानिसहरु अनलाइन सपिङमा आकर्षित हुन्छन् । अर्कोतर्फ अनलाइनमा मार्केट प्राइसभन्दा यति सस्तो उति सस्तो भनेर प्रचार पनि गरिन्छ ।
सस्तो, सपिङका लागि पसल, सुपरमार्केटसम्म जान नपर्ने, घरमैँ सामान आउने भएपनि समयको बचत अनि तत्काल रकमको जोहो गरिहाल्न नपर्ने लगायतका कारण अनलाइन सपिङ धेरैको रोजाइ बन्ने गरेको छ ।
अनलाइनमार्फत सपिङ गराउने विभिन्न कम्पनीहरु मध्ये दराज पनि एक हो । अनलाइन सपिङमा ठगी गर्नेमा दराज अनलाइन अग्रभागमा रहे पनि दराजबारे धेरै गुनासा आएका थिए ।
यसकारण हामीले पनि यसको परीक्षण गर्ने निधो गर्यौँ । यसका लागि हामीले अग्रिम पेमेन्ट गर्यौँ किनकी हामीलाई सामानमा ठगिने गरेको गुनासो धेरै आएको थियो र, यसको परीक्षण गर्नु थियो । हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान अर्डर गर्यौँ ।
बाल्ट्रका ५ ओटा हिटर, ३ ओटा हेडफोन र माउस हामीले अर्डर गरेका थियौँ । तर, हामी पनि ठगिने सूचीबाट आउट हुन सकेनौँ हामीलाई पनि ठगिईयो । हामीले बाल्ट्राका ५ ओटा हिटर मागेका थियौँ तर ४ ओटा बाल्ट्राका हिटर आए भने एउटा याशुदाको आयो त्यो पनि बिग्रेको । तल उल्लेखित अर्डर नम्बरहरुमार्फत अर्डर गरेका थियाैँ ।
जुन छन् : Your Order has been Confirmed (#200896947760998), Your Order has been Confirmed #200896947760998, Your Order has been Confirmed #200875012860998, Your Order has been Confirmed #200896749460998 उल्लेखित अर्डरपछि हामीलाई अर्डर बाटोमा भएको भनेर यस्तो एसएमएस आयो : Your Item(s) is in Transit (#200896947760998)
अर्डर गरेपछि दराज प्रतिनिधिले सामान ल्याइदिए । तर सामान ल्याएको भोलिपल्टबाट समस्या देखियो । कारण थियो अर्डर एउटा डेलिभरी अर्को। अर्कोतर्फ हामीले किनेको माउस १० दिनपछि सबै बिग्रियो । हामीले दराजमा फोन गर्यौँ उनीहरुले सामान ७ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकाले अब केही गर्न नसक्ने जवाफ दिए ।
कसरी ठग्छन् दराजजस्ता कम्पनीलाई हतियार बनाउनेले ?
अनलाइनमार्फत विभिन्न सामान बिक्री गर्दै आएका कम्पनीले कतै बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा त कतै लुकाएर देखाइएभन्दा कमसल सामान बेच्ने र सामान फिर्ता नलैजाने गरेको पाइएको छ । दराज यसैको एक कडी हो ।
हामीले अर्डर गरेका सामानमा एउटा कम्पनीको सामान अर्डर गरेकोमा अर्को कम्पनीको सामान डेलिभरी भएको यथार्थ त छँदैछ बिल समेत छारष्ट छ । हामीलाई झण्डै तीनसय पर्ने हेडफोन बेचेको स्याकार कम्पनी प्रालिका हेडफोन अहिले नै काम नलाग्ने भैसके ।
उक्त कम्पनीले ४०० जति पर्ने सामानको रकम लिएको छ १३०९ रुपैयाँ । अर्कोतर्फ हामीले काठमाडौँमा सामान किनेका हौँ तर बिल आयो पोखराको । बिल छ सन्देश भिडियो रानीपौवा पोखरा । त्यस्तै न्यु चित्रा स्टोरको पनि बिल आएको छ माउसको ।
यसले पनि हेर्नै नदिई आफूले मगाएकोभन्दा कम गुणस्तरको सामानलाई बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । कतिपयले यसलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गर्ने गरेका छन् । दराजजस्तै अनलाइनबाट सपिङ गर्दा हामीजस्तै ठगिएका एक उपभोक्ता भन्छन् –‘सामान नदेखाए नलिने भनेर मैँले भनेँ, बेच्न आएकाले देखाउन मिल्दैन, सामानको खोल खालेको पाइएमा फिर्ता हुन्न भने । अब नखालौँ हेर्न मिल्दैन, खोलौँ र बिग्रिएको आए फिर्ता हुन्न । यो दराज होइन खराब सामान बेच्ने गराज भन्छ नि हिन्दीमा गराज अर्थात ग्यारेज बनेको छ । ’
हुन पनि अनलाइनमार्फत बेचिएको सामान लिने बेलामा उपभोक्ताले हेर्नसमेत पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ एउटा सामान लियो अर्को सामान आइपुग्ने गरेको छ । अनि बेचिएको समान फिर्ता गर्ने वा साट्न नपाइने हुँदा ग्राहक चुपचाप अनलाइन मार्फत ठगी आतंक सहन बाध्य छन् ।
अर्कोतर्फ अनलाइन ठगी गर्ने सहज माध्यम पनि बनेको छ । दराज वा अन्य कुनै कम्पनीलाई अगाडि सारेर बिग्रेका बचेखुशेका सामान अनलाइनमार्फ पठाएर ठग्न अनेकन हतकण्डा अपनाउने गरेका छन् उपभोक्तामाराहरुले ।
ठगिएका एक उपभोक्ता भन्छन् –‘सामानमा धेरै छुट देखाएर बजार मूल्यभन्दा धेरै मूल्यमा बिक्री गरिने गरेको अर्का एक उपभोक्ताको गुनासो छ । फेरि बिक्रीपछि बिक्रेता सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन् । यस्तोमा उपभोक्ताको पैसा फिर्ता हुने कुरै आउँदैन ।’
दोष कसको ?
प्रविधिको सहजतासँगै अनलाइनमार्फत गरिने सपिङले उपभोक्तालाई जति राहत दिएको छ त्यति नै तनाव पनि । उपभोक्ताले सहज रुपमा सामान पाए पनि सामानमा आशंका, सामानको दीर्घकालिन प्रयोग र उपलब्धताबारे उपभोक्तामा भ्रम यथावत् छ ।
अनलाइन मार्फत सपिङ गरेका उपभोक्ता सबैले प्रश्न गर्छन देखाउने एउटा चपाउने अर्को दाँत भनेजस्तै देखाउने एउटा सपिङ गर्दा अर्को पाइएको र चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो अधिकांशको मुखबाट सुनिन्छ ।
अनलाइन सपिङ गराउने संस्थाहरुले उपभोक्ताको यस्तो भ्रम चिर्न सफल हुन सकेका छैनन् । दराज जस्ता संस्थाले कुनै अमुक संस्थाको सामान अर्डर गर्ने उपभोक्तासम्म पुर्याउँछन् । यसमा उनीहरुले सामान डेलिभरीको काम मात्र गर्ने हो तर उपभोक्ताको बुझाईमा दराजजस्ता अनलाइन सपिङ गराउने नै ठग बन्न पुग्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के भने दराजजस्ता अनलाइन सपिङ गराउने संस्था मिडियम मात्र हुन् । उनीहरुको भूमिका भनेको अनलाइन सपिङ गराउने मात्र हो । यसवापत् उनीहरुले उपभोक्ता र सम्बन्धित कम्पनी वा डिलरबाट कमिशन लिन्छन् ।
सामानको मुल्य, सामान सट्टापट्टा, सामान चित्त बुझे अर्डर क्यान्सिल गर्ने सुविधा, सामानको मुल्यमा निश्चित छुट लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस्ता सुविधा भए मात्र ढुक्क भएर जनताले अनलाइनमार्फत सपिङ गर्न सक्ने वातावरण बन्छ ।
अर्कोतर्फ सामान कमशल खालको पठाएर वा बिग्रेका सामान टाकटुक बनाएर पठाएर दराजमार्फत बेच्ने दलालचाहिँ वास्तविक उपभोक्ता ठग हुन् । त्यस्ता दलालचाहिँ कारबाहीमा पर्नुपर्छ ।
अनलाइन सपिङमा ठगीबाट जोगिने उपाय भनेकै सामान आउनेबित्तिकै हेर्दै नहेरी बिल भुक्तानी गर्नुभन्दा चित्त बुझेमात्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ सपिङ गर्दा नै केही शर्त अनुरुप मात्र सपिङ गर्ने गरे पनि सहज हुन्छ ।
साथै अनलाइन सपिङ गराउने कम्पनीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहे पनि उनीहरुले ग्राहकको इच्छा चाहना अनुरुपको सामान दिने वा नदिने गरेको पाइए कारबाहीका लागि, साथै निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएको पाइए पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ ।
बढी मुल्य लिनेमाथि कारबाही हुन्छ त ?
तोकिएको मुल्य भन्दा बढी मुल्य लिइनु, एउटा सामान अर्डर गर्दा अर्को ल्याइदिनु अनि फिर्ता लिन आग्रह गर्दा दुर्वचन गर्नु दराजको नीतिवश गरिएका कार्य पक्कै होइनन् । दराज माध्यम बनाएर दराजमार्फत ठग्ने डिलरहरु वा कम्पनीहरु ठग हुन् ।
यस्ता ठगलाई चाहिँ छाड्नुहुन्न कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा कम्प्लेन गर्नुपर्छ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ नेपाल आजसँग भन्छन् –‘कुनैपनि सामानमा तोकिएको मुल्यभन्दा बढी मुल्य लिन पाईंदैन यदि त्यस्तो भेटाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा जरिवानादेखि कैद सजायसम्मको व्यवस्था छ । ठगी गर्नेलाई कालोबजारी ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन जुन अनुसार पनि कारबाही गर्न सकिन्छ । ?’
यो आलेख यहाँलाई कस्तो लाग्यो ? हामीलाई फेसबुक वा इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
इमेल ठेगाना : editor@nepalaaja.com
शिर्ष नेता भेटे पछि राजदूतको 'मूड चेन्ज', ओलीलाई हटाउने प्रस्ताव बेइजिङग पठाइन
शुक्रबार, १९ असार २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी एकता र सहकार्यको प्रस्ताव
सोमबार, २२ असार २०७७
प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ प्रस्ताव, उधारो सहमतिलाई मान्ने या नमान्ने भन्ने विषयमा प्रचण्ड दोधारमा
आज बामदेबको जन्मदिन, ओलीले फोन गरेर भने, 'प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पूरा होस्...'
शुक्रबार, २६ असार २०७७
कम्यूनिष्ट मन्त्रीले कालो बोकाको बली दिए
ऋण पास गरिदिने भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ